Torbee Afriikaa Suraawwaniin: Fuulbaana 15-21 bara 2017 - BBC News Afaan Oromoo
Torbee Afriikaa Suraawwaniin: Fuulbaana 15-21 bara 2017
Filannoo suuraawwan babbareedoo Afriikaa guutuu fi Afriikaanotaa addunyaarra jiran torban darbe keessaa filataman.
Daani'eel Laaru'el lammiin Afrikaa Kibbaa agarsiisa dorgommii sarara ol fagoo Molesootti lixa Siwiizarlaandiitti, Fuulbaana 15, 2017 wayiita adeemaa jiru kan agarsiisuudha. Hanga Fuulbaana 17' ttis sararawwan adda addaa jaha meetira 45 hanga 304 fagaatan irratti dorgomtoonni sararaa lalaafaa addunyaa irratti himaataniiru.
Guyyaa biraa ammoo, agarsiisi uffannaa sammu- kallattii tokkicha qofaan yaadu Afrikaa Kibbaa kan biraa ture. Afriikaan Kibbaa garee Niwi Ziilaand 'ool Blaaksii Shaampiyoonii Gamtaa Rugbaayiin qabxii 57 -0 n kan injifamte ta'ulleen, deegaraan garee kuruphee biyyasaa (Springboks) miiraa ho'aan ka'ee ture.
Guyyaa Kamisaa, guyyaadhuma Faawundashiiniin Feertreed warqii Feertreed jalqabaa feedhuusaa itti labsetti, yammuu namoonni warqii qotan barbaachaa warqee irra turan.
Doowaattuu tokkotu biyya Masirii, Gaazaatti, barreefana durii dinqisiifataa jira guyyaa Sanbataa. Eddoon awaalchaas qaama lafa awaalcha Saaqaaraa waggoota 2,700 BC.
Konkolaachisaan bisikileetii lammiin Itoophiyaa, shamarree Zaayid Haayiluu Kibxata Shaampiyoonaa guddattoota Bisikileetii Daadniirraa Addunyaa irratti Noroweetti hirmaatte turte. Isheenis bodarra aka bisikileetiin ishee jalaa hatamu hinbeektu turte. Shamarreen waggaa 17 tunis bisikileetiin ishee liffii waggaa sadiitii jettee jirti. Guyyaa lammaffaattis arii qabeenyaan ishee jalaa hatamuu irraa boqatee jirti. Kunis kan gabaafame, deegarsa garee tola ooltoota feesbuukii irratti barbaacha bisikileetiif Bergeen, Noroweetti waamicha taasiisanii.
Guyyaa Dilbataa ammoo, dorgomaan pirezidaantummaa Keenyaa Raa'iilaa Odiingaa, wayita inni Naayiroobitti haasawa taasisuutti, dorgomtoonni gammachu saanii ibsattan. Innis iyyannoon filannoon duraan gaggeefame akka haqamuuf taasiseen manni murtii olaanaa filannicha yoo haqeelleen,Odiingaa fis gamtaan mormiitotaa isaa komoshiiniin filannoo miseensoota isaan ijoo geedaru malee filannoo irrra deebii irratti qooda akka hinfudhannee dubbataniiru.
Guyyaa itti aanuu ammoo, gaalli ilmoon maqaa 'Juner 'n moggaafamte, Paartii bulchaa Jubiliiniif deegarsa agarsiisuuf ofumaan ol lixxe. Shakkii waa'ee meeshaaleen fi adeemsa filannoo Onkolooleessa 17 tiif arbaachisan gutamuu ykn dhiisu isaaniin walqabatee, guyyaan irra deebii guyyoota sagaliin tursiifameera.
Wayita midiyaaleen addunyaa xiyyeefannaa isaanii walgahii Motummoota gamtoomanii kan Magaalaa Niwu Yoork irra taasisaniitti, deeggartoonni paartii mormitootaa Ameerikaa keessaa akka dhagahamaniif carraati fayyadaman. Isaanis lamiilee Toogoo kumaatama torban darbe keessa jijjirraa Heeraa fi taayitaa irraa bu'uu pireezidaanti Fa'ure Ginaasingibe gaafachuuf daandiitti bahan keessaa, suuraa guyyaa Kibxataataa kan kaafamee dha.
Mucichis erga lubbu baraartoota miti mootummaatiin SOS Meditiraaniyaan jedhamuun wayita barbaacha qarqara Libiyaatti Jimaata taasisaniin, abbaa isaatiin hammatamee mul'ata.